बुधबार दक्षिणकालीको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
बुधबार दक्षिणकालीको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
आज वि.सं. २०७६ साल कात्तिक २७ गते बुधबारको राशिफल
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) अरूको भरपर्दा आफ्नो काम प्रभावकारी काम नहुन सक्छ। परिब’न्धले सम’स्या निम्त्याउने हुँदा योजना गो’प्य राखेर अघि बढ्नुहोला । आलो’चकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। मानसम्मानमा बा’धा पुग्ने हुँदा बोली-व्यवहारमा स’जग रहनुहोला। मिहिनेत गर्दा नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। अवसर प्राप्त भए पनि उपलब्धि हातपार्न भने समय लाग्नेछ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) अव’सर प्राप्त भएपनि भू’लवश काममा बा’धा होला। बेसु’रको नि’र्णयले स’मस्या नि’म्त्याउन सक्छ। आफ्ना कम’जोरीमाथि टि’प्पणी हुन सक्छ। तर शुभचिन्तकहरूले अ’प्ठ्यारो पर्दा साथ दिनेछन्। दोहोर्याएर प्रयास गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ। बि’छोडिएका आफन्तजनसँग भेटघा’टको अव’सर जु’ट्नेछ। स्वास्थ्य क’मजोर हुने समय रहेकाले खानपानमा स’जग रहनुहोला। मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) आक’स्मिक ख’र्च बढ्नाले अर्थ अभा’व देखापर्न सक्छ। काममा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अरूको क’रकापमा गरिएको कामले पनि फाइदा उठाउन सकिनेछ। अध्ययनका सन्दर्भमा भ्रमण हुन सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने वा आफन्तबाट टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। केही खर्च लागे पनि प्रयत्न गर्दा देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) विवा’दास्पद कामलाई टुंगो लगाउँदै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। कर्मयोगले आम्दानी बढाउनेछ। मेहनत गर्दा आयआर्जनका नयाँ स्रोतसमेत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्तिका साथै दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुने सम्भावना छ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परि’वर्तन आउनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जु’ट्नेछ। महत्त्वाकांक्षाले केही सम’स्या पनि नि’म्त्याउन सक्छ, स’जग रहनुहोला। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ। चुनौ’तीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अव’सर तथा सफलताले पछ्याउनेछन्। टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। अभाव ह’ट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। अध्यात्मभाव जागृत हुनुका साथै परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) सामान्य कामका लागि धेरै दौडधु’प गर्नुपर्नेछ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जु’ट्नुपर्ला। परिब’न्धले चु’नौती नि’म्त्याउन सक्छ। ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गु’म्न सक्छ। अरूका विषयमा चासो लिँदा व्य’र्थैमा झमे’ला बेहोर्नुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तत्काल फाइदा नभए पनि पछिका लागि स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। तर, लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौ’डनुपर्ला। सामान्य कामलाई सञ्चित रकम खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। आजको यात्रा तथा आतिथ्य ख’र्चिलो बन्नेछ। वचन पूरा गर्न नसक्दा आ’लोचित समेत भइनेछ। परिस्थिति र सम्बन्ध अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा सज’ग रहनुपर्ला। ह’डबडीले घर-व्यवहारमा केही स’मस्या नि’म्त्याउनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) भौतिक साधन जु’ट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। पहिलेका सहयोगीहरू प्रति’स्पर्धामा उत्रिन सक्छन्। तापनि चु’नौती चि’र्दै काम बनाउन सकिनेछ। ई’र्ष्या गर्नेहरूबाट केही साव’धान भने रहनुपर्ला। मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। गुरुजनको सहयोग जु’ट्नाले पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रति’स्पर्धामा अरूलाई उछि’न्न सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। लगनशीलताले राम्रो उपलब्धि दिलाउनेछ। पछि फाइदा हुने काम सम्पादन हुनेछ। कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) परि’स्थितिसँग सम्झौ’ता गर्नुपरे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। केही सं’घर्ष गर्नुपरे पनि फाइदा उठाउन सकिनेछ। कृषिकर्म र व्यावसायिक कामको योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा पनि फाइदा हुनेछ। साथीभाइले साथ दिनेछन्। पशुधन र जमिनबाट लाभ हुनेछ। मान्यजनको सु’झाव शिरोधार्य गर्नुहोला। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। परिश्रमद्वारा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। आफ्ना कमजोरीबाट फाइदा उठाउनेहरू भने सक्रिय रहनेछन्। उपलब्धि जोगाउन अलि साव’धान रहनुहोला। नेपाली पात्रोबाट
भीमेश्वरको दर्शन गरि जान्नुहोस् तपाईंको आज
आज मिति वि.सं.२०७७ साल पौष २१ गते मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी ०५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ प्रमादी...
जानीराख्नुहोस् : बिहीबार के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन !
काठमाडौं, २२ असोज : हिन्दु धार्मिक मान्यता अनुसार हप्ताका सात दिनको आफ्नै छुट्टाछुट्टै महत्व छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको...
दक्षिणकालीको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको बिहिवार
अशोज १५, २०७७
मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
अशोज १३, २०७७
गणेश भगवानको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको मंगलबार
शिव-पार्वतीको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको सोमबार
प्रकाश शाहीको निनै मार्मिक तिज गित मेरो नाचो।